I-china entsha udonga lwamazibuko amatsha ngokukhawuleza ukutshaja usb itshaja PD30W ukwenziwa kunye nefektri | Staba Umbane
Ishaja yodonga lwe-USB-C ilungele abasebenzisi abafuna itshaja ehambelana nekhaphukhaphu kwaye enamandla. Ukukhutshwa ukuya kuthi ga kwi-30 W, PD ishaja yodonga kuzo zonke izixhobo zakho ozithandayo kubandakanya nefowuni yakho, iNintendo Shintsha, kunye neMacBook (amaxesha okutshaja axhomekeke kwizicatshulwa zesixhobo).
Iipaji ezisongekileyo zetshaja zenza imeko-yokuhamba enomdla, ngelixa ulawulo lwentambo lugcina intambo yakho ihlelwe kakuhle. Eyakhelwe ngokhuseleko engqondweni, ulawulo lweesekethe lwamandla lubonelela ngombane ogqithisileyo, ogqithisileyo, ogqithisileyo, okhuselayo omfutshane kunye nokukhuselwa kokunyuka, kwaye kuyahambelana nomgangatho we-VI weSebe lezaMandla lase-US.
Ishaja ekhawulezayo yePD ngokuhambelana okuphezulu kunye nokuguquguquka, isisombululo sokutshaja ngababini esikwaziyo ukuxhasa zonke izixhobo ezinamandla ze-USB A / C ezinje ngeefowuni kunye neelaptops ukuze zisebenze ngokuzimeleyo okanye ngaxeshanye. Ishaja yodonga lwe-USB enoyilo oluhlengahlengisiweyo lweplagi ikuvumela ukuba unqande ukuvimba ezinye iindawo zokuphuma kunye nokubekwa kwakhona kwizibuko le-USB A / C ukuze ibekwe ngokulula intambo eqhagamshelwe- ngakumbi iluncedo xa usebenzisa umtya wombane okanye umkhuseli wokunyuka kunye neendawo ezininzi. Kwakhona kwi-chip ye-smart IC-I-chip ye-IC eqhubela phambili ibhaqa ngokuzenzekelayo kwaye ihambise amandla aphezulu okutshaja kwizixhobo ezixhumeneyo. Isixhobo sakho sihlawula ngokukhawuleza okukhulu ngelixa ukhusela ubomi bakho bebhetri. (Iyahambelana zombini ukutshaja kwe-PD & QC).
INkulumbuso kunye nePhathekayo-Amazibuko avavanyiwe ukumelana nokusetyenziswa okungaphezulu kwe-10,000 kwaye itshaja yenzelwe ukumelana nokutshaja okuqhubekayo ubuncinci beeyure ezingama-10,000, ukukunika umgangatho onokuthembela kuwo. I-pd charger adaptha ngokusasazwa kwamandla okrelekrele, ukwandisa ukusebenza ngokukuko kwezixhobo ezizodwa okanye ezininzi. Yenzelwe ukuba isebenze kunye nokuveliswa kweekhompyuter kunye nezixhobo ze-smart, ukuvumela ukuqhelaniswa kweeplagi kunye nokutshaja ngokukhawuleza.
Egqithileyo Umgangatho we-usb wokutshaja ngokukhawuleza udonga olusebenzayo kwishaja ye-usb PD30W
Okulandelayo: Iphathekayo ngokukhawuleza gan uhlobo c iadaptha yodonga usb itshaja PD 18W